नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको आधा दशक उपलब्धिमूलक रह्यो
दामोदर भण्डारी, निमित्त सीईओ, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी
नेपालको एकमात्र पुनर्बीमा कम्पनी ‘नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी’ (नेपाल री) बिहीवार ५ वर्ष पूरा गरेर छैटौं वर्षमा प्रवेश गर्दै छ । नेपाल सरकारको प्रमुख शेयर स्वामित्व सहित स्थापना भएको यो कम्पनीले आधा दशक अवधिमा के कस्ता उपलब्धि गर्‍यो त ? प्रस्तुत छ, कम्पनीको उपलब्धि र आगामी योजनाबारे निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दामोदर भण्डारीसँग आर्थिक अभियानका मिलन विश्वकर्माले गरेको कुराकानीको सार :
आधा दशकको अवधिमा कम्पनीले के कस्ता उपलब्धि हासिल गर्न सक्यो ?
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका लागि यो अवधि अत्यन्त फलदायी र उपलब्धिमूलक नै भएको अनुभव गरेका छौं । यस अवधिमा कम्पनी व्यावसायिक रूपमा बलियो हुँदै आएको छ । गत आवमा मात्र हामीले करीब ७ अर्ब रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गर्‍यौं । हालसम्म कम्पनीले ३२ मुलुकमा व्यवसाय विस्तार गरेको छ । छैंटौं वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा कम्पनीले अहिलेसम्म नोक्सानी बेहोर्नु परेको छैन । फलस्वरूप अहिले हामी दक्षिणा एशियामै दोस्रो स्थानमा छौं । पहिलो स्थानमा भारतको जनरल इन्स्यारेन्स कर्पाेरेशन अफ इन्डिया पर्छ ।
हामीले यहाँका बीमा कम्पनीहरूले २० प्रतिशत बराबरको अनुपातमा दिने पुनर्बीमालाई स्वीकार गर्न सकेका छौं । यस्तै सात जीवन बीमा कम्पनीको शतप्रतिशतको अनुपातमा पुनर्बीमा गर्न सफल भएका छौं । केही निर्जीवन बीमा कम्पनीले पनि ३ प्रतिशतदेखि १२ दशमलव ५ प्रतिशतसम्मको अनुपातमा ‘ट्रिटी’ पुनर्बीमा हामी मार्फत नै गर्दै आएका छन् । उनीहरूले ‘फ्याकल्टेटिभ’ पुनर्बीमाको व्यवसाय पनि दिँदै आएका छन् । यसले नेपाली बजारमा हाम्रो कम्पनीको विश्वास बढ्दै गएको स्पष्ट हुन्छ । साथै स्थापनाकालमा कम्पनीको रू. २ अर्बको चुक्तापूँजीलाई अहिले रू. ८ अर्ब ४० करोड पुर्‍याउन सफल भएका छौं । कम्पनीले ५ वर्षको अवधिमा गरेका मुख्य उपलब्धि यिनै हुन् ।
अहिले यहाँका बीमा कम्पनीहरूले २० प्रतिशतको अनुपातमा पुनर्बीमा यही कम्पनीमा गर्दै आएका छन् । कम्पनीको जोखिम धारण क्षमता त्योभन्दा पनि बढी छ कि ?
हामीले सरकारलाई यहाँको बीमा कम्पनीले ३० प्रतिशतको अनुपातमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याउन प्रस्ताव गरेका थियौं । त्यो बराबरको प्रस्ताव गर्नुको अर्थ कम्पनीको जोखिम धारण क्षमता बढी भएरै हो । तर सरकारले २० प्रतिशत मात्र गरे हुने व्यवस्था ग¥यो । हामीले त्यहीअनुसार यहाँका बीमा कम्पनीबाट व्यवसाय लिइरहेका छौं । यसैगरी फ्याकल्टेटिभ र ट्रिटी पुनर्बीमा पनि गर्दै आएका छौं, जसअनुसार कम्पनीको धारण क्षमता बढी नै छ जस्तो लाग्छ । यसलाई निरन्तरता दिनु हाम्रो चुनौती पनि हो । धारण क्षमता छ भन्दैमा यहाँका कम्पनीको शतप्रतिशत मात्रामा पुनर्बीमा व्यवसाय भने लिँदैनौं । उनीहरूबाट लिइएका जोखिममध्ये पनि कम्पनीले थेग्न सक्ने जोखिम राखेर बाँकीको रेट्रोसेशन (पुनर्बीमाको पनि पुनर्बीमा)मार्फत अन्य पुनर्बीमा कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्ने गरेका छौं । अहिलेको अवस्थामा हामीले कुल बीमाशुल्कको करीब १० प्रतिशत रकम रेट्रोसेशन मार्फत बाहिर पठाएका छौं ।
तपाईंको भनाइअनुसार कम्पनीले ५ वर्षको अवधिमा थुपै्र उपलब्धि गरेको देखियो । यस्ता उपलब्धिका बीच पनि गर्न नसकेका केही काम छन् ?
वास्तवमा कम्पनीले यो अवधिमा धेरै काम गर्न सक्यो । तर दुईओटा काम गर्न सकेनौं । यही अवधिमा कम्पनीको रेटिङ गर्ने भनेका थियौं, तर सम्भव भएन । समयमै आईपीओ जारी गर्न नसक्दा यसको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । अहिले आईपीओ जारी हुने प्रक्रियामा रहेको छ । कम्पनीको रेटिङ गर्ने तयारी पनि गरेका छौं । सम्भवतः हामी चालू आवमै रेटेट कम्पनी हुन्छौं । साथै अन्तरराष्ट्रिय स्तरको पुनर्बीमा सफ्टवेयर ल्याउने भनेका थियौं । त्यो पनि प्राविधिक समस्याका कारण हुन सकेन । तर यसको तयारी भने गरेका छौं ।
अबको ५ वर्षपछि कम्पनीले १ दशकको यात्रा पूरा गर्नेछ । त्यो बेलामा कम्पनीलाई कस्तो अवस्थामा देख्न सकिन्छ होला ?
५ वर्ष भनेको धेरै लामो सयम पनि हो । त्यो बेलासम्ममा ठूलो मात्रामा व्यवसाय गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ । अहिले वार्षिक रू. १० अर्ब प्रिमियम उठाउने लक्ष्य लिएका छौं भने त्यो बेला वार्षिक रू. ४० अर्बभन्दा बढी प्रिमियम उठाउन सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ । साथै अमेरिका, यूरोप, क्यानडा, जापान बाहेकका सबै मुलुकमा हाम्रो उपस्थिति हुनेछ । शायद अबको ५ वर्षमा भारत, बेलायत, सिंगापुर लगायत केही देशमा शाखा तथा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न सक्छौं । त्यसपछि कम्पनीले अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट सोचे अनुरूपको व्यवसाय लिन सक्छ ।
हामीले लक्ष्य अनुसार काम गर्ने हो भने अबको ५ वर्षपछि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी एउटा स्टार कम्पनीको रूपमा स्थापित हुनेछ । तर त्यो स्तरमा पुग्न हामीलाई थुप्रै चुनौती पनि छन् । त्यसका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति, पूर्वाधार लगायतको पूर्ति गर्नुपर्नेछ । साथै कम्पनीलाई पनि उच्च ग्रेडको रेटिङ प्राप्त गराउने मुख्य चुनौती छ ।
कम्पनीले नेपाल सहित ३२ देशमा सेवा विस्तार गरेको छ । कम्पनीको सेवाबाट नेपाल र विदेशका बीमा कम्पनीहरू सन्तुष्ट छन् त ?
हाम्रो अनुभव अनुसार विदेशका बीमा कम्पनीहरू हामीप्रति सन्तुष्ट नै छन् । कम्पनी रेटेट नहुँदा पनि उनीहरूले निरन्तर व्यवसाय दिइरहेका छन् । बाहिरबाट आउने प्रिमियमको मात्रा पनि बढ्दै गएको छ । हामीले राम्रो सेवा दिएका छौं भन्ने यो आफैमा एउटा बलियो प्रमाण हो । अहिले विशेष कारणवश प्mयाकल्टेटिभ पुनर्बीमालाई केही समयका लागि रोकेका छौं । अहिले उनीहरूले खुला गरिदिन माग गरेका छन् ।
यहाँका बीमा कम्पनीहरू पनि दिनप्रतिदिन सन्तुष्ट हुँदै गएका छन् जस्तो लाग्छ । फलस्वरूप थप दुई जीवन बीमा कम्पनी हामीसँग शतप्रतिशतको अनुपातमा पुनर्बीमा गर्र्ने तयारीमा छन् । साथै निर्जीवन बीमा कम्पनीले पनि छुट्टै रूपमा फ्याकल्टेटिभ पुनर्बीमाको व्यवसाय दिइरहेका छन्, जसले गर्दा यहाँका कम्पनी पनि हाम्रो सेवाप्रति सन्तुष्ट छन् भन्ने लाग्छ ।
कम्पनीले रू. १ अर्ब ६० करोड बराबरको आईपीओ जारी गर्दै छ । त्यसको प्रक्रिया कहा“ पुग्यो ? साथै कम्पनीको रेटिङ गर्ने सम्बन्धमा प्रगति के छ ?
आईपीओ जारी गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौं । बोर्डले केही थप कागजपत्र माग गरेको छ । सम्भवतः १ हप्ताभित्र बोर्डले मागेको कागजपत्र पेश गर्छाैैं । त्यसपछि आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर मङ्सिरभित्रै आईपीओ जारी गर्ने तयारीमा छौं । आईपीओ जारी भएलगत्तै कम्पनीको रेटिङ गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं । हाल यसका लागि मापदण्ड तथा पूर्वाधार जुटाउने काम भइरहेको छ । एएम बेस्ट नामक अमेरिकी रेटिङ एजेन्सी मार्फत कम्पनीको रेटिङ गर्ने योजना छ । चालू आवमै हामी रेटेट कम्पनी हुन्छौं ।
कम्पनीमा नेपाल सरकारको ४४ प्रतिशत शेयर छ । यो अवस्थामा सरकार र नियामक निकाय बीमा समितिबाट कत्तिको सहयोग पाउनु भएको छ । साथै आगामी दिनमा कस्तो सहयोगको अपेक्षा गर्नु भएको छ ?
हालसम्म कम्पनीलाई सरकार र बीमा समितिबाट आवश्यक सहयोग मिलेको छ । अर्थ मन्त्रालय र बीमा समितिले अभिभाकको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । अहिलेसम्म त्यस्तो असहयोग भन्ने छैन । आगामी दिनमा यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । २० प्रतिशतको अनुपातमा हवाई बीमाको पुनर्बीमा गर्ने नीति लागू गर्न सकिएको छैन । यसमा केही प्राविधिक अफ्ठ्याराहरू छन्, जस कारण हवाई बीमाको पुनर्बीमा गर्न जटिल छ । त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि सरकारले कम्पनीलाई थप बलियो बनाउनेतर्फ काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
हवाई बीमाको व्यवसाय धेरै जोखिमयुक्त छ । यसको पुनर्बीमा गर्न कम्पनीको क्षमता अझै बढाउनुपर्छ । यस्तो बीमाका लागि हामीले एउटा उपसमिति पनि बनाएका छौं, जसअनुसार अब छिट्टै हवाई बीमाको पनि पुनर्बीमा गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्छौं ।
पुनर्बीमा कम्पनीले पनि आफ्नो पुनर्बीमा गनुपर्ने हुुन्छ । तपाईंहरूले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नु भएको छ ?
हामीले कम्पनीको पुनर्बीमालाई अन्त्यन्त सुरक्षित ढंगले अगाडि बढाएका छौं । यसलाई मुख्यतः तीन तरीकाले व्यवस्थापन गर्दै आएका छौं । एक, संसारमा नाम चलेका ए–रेटेट पुनर्बीमा कम्पनीसँग मात्र पुनर्बीमा गर्ने नीति बनाएका छौं । दोस्रो, एकआपसमा व्यवसाय आदानप्रदान गर्नेगरी ‘पारस्परिक’ ढंगले पनि पुनर्बीमा गर्ने नीति ल्याएका छौं । यसैगरी कम जोखिम भएको मुलुकका कम्पनीसँग पुनर्बीमा गर्ने नीति ल्याएका छौं ।
अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट थप व्यवसाय लिन नयाँ नयाँ ठाउँमा जाने गरेका छौं । यसका लागि योजनाबद्ध रूपमै अगाडि बढेका छौं । सञ्चालक समितिले पनि पनि भारतमा शाखा खोल्न अनुमति दिएको छ । सम्भवतः यो आर्थिक वर्षमा त्यहाँ कम्पनीको शाखा खोल्नेछौं ।
हालै कम्पनीको निमित्त कार्यकारी प्रमखको रूपमा नियुक्त हुनु भएको छ । तपाईं आएपछि कम्पनीले के कस्तो उपलब्धि गर्‍यो ?
म यो पदमा आएपछि कम्पनीको पुनर्बीमा व्यवस्थापनलाई राम्रो बनाउन बनाउन सकेका छौं । अहिले पहिले भन्दा पनि राम्रो पुनर्बीमा कम्पनीमा रेट्रोसेशन गर्न शुरू गरेका छौं । यस अवधिमा हान्नोभर री (जर्मनी), एभरेस्ट री (सिंगापुर), क्यानोपिएस री (सिंगापुर), लिबर्टी री (यूरोप) र जीआईसी जस्ता ए–रेटेट कम्पनीसँग रेट्रोसेशन गर्न सफल भएका छौं ।
कम्पनीको नयाँ भवनको संरचना बनाएर टेन्डर प्रक्रियामा जाँदै छौं । यसका अलावा छिट्टै आईपीओ जारी गर्दै छौं । शतप्रतिशतको अनुपातमा पुनर्बीमा गर्ने जीवन बीमा कम्पनीको संख्या पनि बढ्दै छ ।
पुनर्बीमा व्यवसाय नेपालका लागि नयाँ विषय भएकाले यससम्बन्धी पर्याप्त कानून पनि छैन । यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
नेपालमा अहिले पुनर्बीमा सम्बन्धी पर्याप्त कानून छैन । हाल संसद्मा बीमा सम्बन्धी नयाँ कानून विचाराधीन अवस्थामा छ । त्यसमा पुनर्बीमा सम्बन्धी थुप्रै व्यवस्था छन् । त्यो कानून लागू भएपछि हामीलाई केही सहज हुन्छ । तर त्यतिले मात्र पुग्दैन जस्तो लाग्छ । कम्पनी बीमा समितिकै नियमनमा हुनेगरी छुट्टै कानून ल्याउन आवश्यक छ । त्यसका लागि हामीले आफ्नो व्यवसाय लगायत पक्षलाई दृढ रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।
थुप्रै अवसर र सम्भावना बोकेको यस कम्पनीलाई आगामी दिनमा के कस्ता चुनौती छन् होला ?
अवश्य पनि हामीलाई केही चुनौती छन् । बाहिरबाट प्राविधिक तथा बजार विश्लेषक ल्याउन पनि चुनौती देखिएको छ । यस्तै यहाँका बजारबाट जुन प्रतिशतमा व्यवसाय लिइरहेका छौं । त्यसलाई निरन्तरता दिन र उनीहरूको अपेक्षा अनुसारको सेवा प्रवाह गर्न पनि चुनौती नै छ । कुन बीमा कम्पनी कस्तो हो भन्ने कुरा दाबी परेपछि थाहा हुन्छ । त्यसैले कम्पनीलाई तत्काल दाबी भुक्तानी दिने अवस्थामा पुर्‍याउन आवश्यक छ । यसका लागि तरलता भइरहने गरी कम्पनीको लगानीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । व्यवसायको वृद्धिदर कामय गर्नु पनि कम्पनीका लागि चुनौती हो । साथै कम्पनीको पूर्वाधार विकास र अन्तरराष्ट्रिय स्तरको सफ्टवेयर भित्र्याउन पनि चुनौती छ जस्तो लाग्छ ।